IZenzo 5 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
5 Noko ke, indoda ethile, uAnaniyas ngegama, ndawonye noSafira umfazi wayo, yathengisa loo nto babenayo 2 yaza yankonya ngokufihlakeleyo inxalenye yexabiso, nomfazi wayo esazi ngako oko, yazisa nje inxalenye yaza yayibeka ezinyaweni zabapostile.+ 3 Kodwa uPetros wathi: “Ananiyas, kutheni uSathana+ ekukhaliphisile nje ukuba uxokise+ umoya oyingcwele+ nokuba unkonye ngokufihlakeleyo inxalenye yexabiso lentsimi? 4 Lo gama nje ibihleli kuwe ibingahlalanga iyeyakho na, nasemva kokuba ithengisiwe ayiqhubekanga iselulawulweni lwakho na? Bekutheni ukuze ube nenjongo yesenzo esinjengesi entliziyweni yakho? Uxokise,+ kungekhona abantu, kodwa uThixo.”+ 5 Ekuveni la mazwi uAnaniyas wawa phantsi wabhubha.+ Yaye bonke abo bakuvayo oku bafikelwa luloyiko olukhulu.+ 6 Kodwa amadodana asukuma, amsongela ngamalaphu,+ aza amthwalela ngaphandle amngcwaba. 7 Ke kaloku emva kwesithuba esimalunga neeyure ezintathu kwangena umfazi wakhe, engakwazi oko kwakwenzekile. 8 UPetros wathi kuye: “Ndixelele, nina nobabini niyithengise ngokungaka na intsimi?” Wathi: “Ewe, ngokungaka.” 9 Ngoko uPetros wathi kuye: “Bekutheni ukuze nivumelane nina nobabini ngokuvavanya+ umoya kaYehova? Khangela! Iinyawo zabo bangcwabe indoda yakho zisemnyango, yaye baya kukuthwalela ngaphandle.” 10 Ngequbuliso wawa phantsi ezinyaweni zakhe wabhubha.+ Xa abafana bangenayo bamfumana efile, yaye bamthwalela ngaphandle baza bamngcwaba ecaleni kwendoda yakhe. 11 Ngenxa yoko ibandla liphela nabo bonke abo babesiva ngezi zinto bafikelwa luloyiko olukhulu. 12 Ngaphezu koko, ngezandla zabapostile kwaqhubeka kusibakho imihlola nemiqondiso phakathi kwabantu;+ yaye bonke babemxhelo mnye kwivaranda kaSolomon.+ 13 Enyanisweni, akukho namnye kwabanye owayenesibindi sokuzibandakanya nabo;+ noko ke, abantu babebabonga.+ 14 Ngokungakumbi kunoko, amakholwa eNkosini ongezeleleka, inkitha yamadoda neyabafazi;+ 15 kangangokuba bazisa abagulayo kwanakwiindlela eziphangaleleyo baza bababeka apho kwiimandlalo ezincinane nasezinkukweni, ukuze, njengoko uPetros wayeye adlule apho, ubuncinane isithunzi sakhe sibe nokuwela phezu kwabanye babo.+ 16 Kanjalo, inkitha evela kwizixeko ezijikeleze iYerusalem yabuthelana apho, ithwele abantu abagulayo nabo babekhathazwa ngoomoya abangahlambulukanga, yaye babephiliswa bonke. 17 Kodwa umbingeleli omkhulu nabo bonke abo babekunye naye, ihlelo elalikho ngoko labaSadusi, basukuma baza bazaliswa likhwele,+ 18 yaye bababamba abapostile baza babafaka kwindawo yovalelo kawonke-wonke.+ 19 Kodwa ebudeni bobusuku ingelosi kaYehova+ yazivula iingcango zentolongo,+ yabakhupha yaza yathi: 20 “Hambani niye kuma etempileni, nize niqhubeke nithetha ebantwini onke amazwi angobu bomi.”+ 21 Emva kokuva oku, kwakuthi qheke ukusa bangena etempileni baza baqalisa ukufundisa. Ke kaloku xa umbingeleli omkhulu nabo babekunye naye bafikayo, babizela ndawonye iSanhedrin nayo yonke indibano yamadoda amakhulu oonyana bakaSirayeli,+ yaye bathumela entolongweni ukuba baziswe. 22 Kodwa akufika apho amagosa akabafumananga entolongweni. Ngoko abuya aza anikela ingxelo, 23 esithi: “Intolongo siyifumene itshixiwe ngalo lonke unqabiseko nabalindi bemi eminyango, kodwa sakuvula asifumananga bani ngaphakathi.” 24 Ngoko, umphathi wetempile nababingeleli abaziintloko xa beva la mazwi, basuka baxakwa zezi zinto mayela noko kwakuya kuba kuko oku.+ 25 Kodwa kwafika umntu othile waza wabaxelela esithi: “Khangelani! amadoda eniwafake entolongweni asetempileni, emile yaye afundisa abantu.”+ 26 Ngoko umphathi namagosa akhe baya baza babazisa, kodwa ngaphandle kogonyamelo, njengoko babesoyika+ ukuxulutywa ngabantu. 27 Babazisa baza babamisa kwiholo yeSanhedrin. Yaye umbingeleli omkhulu wababuza 28 waza wathi: “Saniyalela ngokucacileyo+ ukuba ningafundisi ngeli gama, ukanti, khangelani! niyizalisile iYerusalem ngemfundiso yenu,+ yaye nizimisele ukuzisa igazi+ lalo mntu phezu kwethu.” 29 Ekuphenduleni uPetros nabanye abapostile bathi: “Simele sithobele uThixo njengomlawuli kunabantu.+ 30 UTHIXO wookhokho bethu wamvusa+ uYesu, enambulalayo nina, namxhoma esibondeni.+ 31 UThixo wamphakamisela ngasekunene+ kwakhe njengoMmeli Oyintloko+ noMsindisi,+ ukuze anike uSirayeli inguquko+ noxolelo lwezono.+ 32 Yaye singamangqina ale mibandela,+ kunjalo nangomoya oyingcwele,+ lowo uThixo awunike abo bamthobelayo njengomlawuli.” 33 Bakukuva oku, baziva bexheleke ngokunzulu yaye babefuna ukubabulala.+ 34 Kodwa kwasukuma umntu othile kwiSanhedrin, umFarisi ogama linguGamaliyeli,+ umfundisi woMthetho owayehlonitshwa ngabantu bonke, waza wanikela umyalelo wokuba aba bantu bakhutshelwe ngaphandle okwethutyana.+ 35 Yaye wathi kubo: “Madoda akwaSirayeli,+ kulumkeleni oko nizimisele ukukwenza ngaba bantu. 36 Ngokomzekelo, ngaphambi kwale mihla kwasukuma uThuda, esithi naye unguthile,+ yaye inani lamadoda, amalunga namakhulu amane, lathelela iqela lakhe.+ Kodwa wabulawa, yaye bonke abo babemthobela basasazeka baza ababa nto yanto. 37 Emva kwakhe kwasuka uYudas umGalili ngemihla yobhaliso,+ watsala abantu emva kwakhe. Ukanti loo mntu watshabalala, baza bonke abo babemthobela bachithachitheka ngokubanzi. 38 Ngoko ke, nakule meko, ndithi kuni, Musani ukugxuphuleka kwaba bantu, kodwa bayekeni; (ngenxa yokuba, ukuba eli cebo okanye lo msebenzi ngowabantu, uya kubhukuqwa;+ 39 kodwa ukuba ngokaThixo,+ aniyi kukwazi ukubabhukuqa;)+ kungenjalo, nisenokufunyanwa okunene ningabo balwa nxamnye noThixo.”+ 40 Ngako oku banikela ingqalelo kuye, yaye bababiza abapostile, babakatsa,+ babayalela ukuba bayeke ukuthetha ngegama likaYesu,+ baza babandulula. 41 Bona, ke ngoko, bemka phambi kweSanhedrin, benemihlali+ ngenxa yokuba babebalelwe ekuthini bafanelwe kukuhlaziswa ngenxa yegama lakhe.+ 42 Yaye imihla yonke etempileni nakwizindlu ngezindlu+ baqhubeka ngaphandle kokuyekelela befundisa+ kwaye bevakalisa iindaba ezilungileyo ezingoKRISTU, uYesu.+